tourism Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / tourism
चीनले कृषि, व्यापार, पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने
Tags: agriculture, alert-news, business, chinesesupport, culture, economics, kathmandu, nepalchina, tourism
काठमाडौँ, ५ चैत । चीनले नेपालको कृषि, व्यापार, सम्पर्क विस्तार, संस्कृति र पर्यटनका क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग आज अपराह्न त्यहाँका विदेशमन्त्री याङ यीसँग बेइजिङमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा चीनले… बाँकी अंश »
होम स्टेलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीयलाई तालिम
Tags: alert-news, economics, homestay, localtraining, management, nepaltourism, panchthar, tourism
पाँचथर, २७ माघ । होम स्टेलाई व्यवस्थित पाँचथरमा स्थानियकालागि तालिमको आयोजना गरिएको छ । जिल्लाको सिदिन गाविस–१, दवाइपानीमा होम स्टे सम्बन्धी तालिमको आयोजना गरिएको छ । प्राकृतिक क्षेत्रको अध्ययन तथा भ्रमणमा आउनेलाई स्थानीवासीको घरमा राख्न भन्दैँ तालिमको आयोजना गरिएको हो… बाँकी अंश »
कहिले कुन जहाज आयो ?
Tags: airbusnepal, nepalairlines, tourism
खबरडेस्क, २६ माघ । कहिले कुन जहाज ? डग्लस डीसी-३ डकोटा निगमले सन् १९५८ मा यही विमानबाट व्यावसायिक उडान सुरू गरेको हो । टि्वनअटर डीएचसी-६ सन् १९७१ मा भित्रिएको १९ सिटे जहाजले नेपाल वायुसेवा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याएको मानिन्छ । क्यानडामा… बाँकी अंश »
Tags: alert-news, construction, economics, falgun, pokharainternationalairport, tourism, transportation
पोखरा, २६ माघ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले पोखरामा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यको शिलान्यास फागुन महिनाको तेस्रो सातामा हुने बताउनुभएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको हीरक जयन्ती एवम् स्मारिका विमोचन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै… बाँकी अंश »
पर्यटनमा लगानी बढ्दो
Tags: alert-news, economics, increasing, investment, melamchi, tourism
मेलम्ची, २५ माघ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेका पर्यटकीय स्थलमा पछिल्लो समय लगानी गर्ने बढ्न थालेका छन् । जिल्लाका प्रख्यात पर्यटकीय स्थल भोटेचौर, हैबुङ, तातोपानी, चौतारा, मेलम्ची र हेलम्बुमा लगानी गर्नेहरु बढ्दोमात्रामा भेटिन थालेका छन् । पर्यटनको निकै चहलपहल हुने भोटेचौरमा… बाँकी अंश »
निकुञ्जमा अलपत्र परेका दुई पर्यटकको उद्धार
Tags: chitwan, cnp, paryatan, Sauraha, tourism
रत्ननगर (चितवन), १७ माघ । पूर्वी चितवनको रत्ननगरस्थित सौराहा नजिकै चितवन निकुञ्जभित्र अलपत्र परेका दुई चिनियाँ नागरिकको सकुशल उद्धार गरिएको छ । निकुञ्जभित्र अपलत्र परेका उनीहरुलाई नेपाली सेना र प्रहरीले उद्धार गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आज दिएको… बाँकी अंश »
निर्मलपोखरीको डाँडामा फोक्सिङ हिल रिसोर्टको निर्माण
Tags: foksinghillresort, pokhara, resortpokhara, tourism
पोखरा, १७ माघ । पोखरा उपमहानगरपालिकाको वडा नं २३ को निर्मलपोखरीको डाँडामा फोक्सिङ हिल रिसोर्टको निर्माण गरिएको छ । पोखरा–१७ विमानस्थल नजिक बस्ने भूपेन्द्र गिरीको निजी रु एक करोड ५० लाखको लगानीमा बनेको उक्त रिसोर्टमा हाल १० कोठाको व्यवस्था गरिएको… बाँकी अंश »
स्वर्गद्वारीको होटलमा रु नौ करोडको लगानी
Tags: alert-news, pyuthan, swargadwari, tourism
(सिटी पोख्रेल) प्युठान, ४ पुस । चार वर्ष पहिला धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी दर्शनका लागि आउनुभएका नवलपरासीका उद्धव पौडेलले यहाँ दुई दिन बिताउनसमेत मुस्किल भयो । त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३२ मा बस्दै आउनुभएका डिल्लीराज र कमला आचार्यको स–परिवार यहाँ… बाँकी अंश »